8 Xikmadood Oo Ku Tusaya Nooca Ninka Ay Noloshaada U Baahantahay - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»8 Xikmadood Oo Ku Tusaya Nooca Ninka Ay Noloshaada U Baahantahay
1. Ninka wanaagsan ma shukaansado gabadha ugu quruxda badan dunida- wuxuu shukansadaa gabadha nolosha uga digtaa mid qurux badan“
2. Ninka wanaagsan ma dhaawaco xaaskiisa, wuuka taxadaraa ficilladiisa iyo go’aannadiisa, sidaa darteed marnaba wax dhibaya oo xanuunjiyana ma yiraahdo.
3. Ninka wanaagsan ma xallin karo dhibaatooyinkaaga dhan balse wuxuu kuu ballan qaadaa inaadan kaligaa wajahayn dhibaatooyinkaas.
4. Ragga wanaagsan waa kuwo daacad ah, waqti uma hayaan haween kale maxaa yeelay waxay ku mshquulsanyihiin jacaylka gabdhaha ay heystaan.
5. Awoodda dhabta ah ee ninka waxay ku jirtaa awoodda dholllacadeynta haweeneyda dhinac fadhisa.
6. Ninka wanaagsan marnaba ma joojiyo isku dayga ah inuu haweeneydiisa tuso qiimaha ay ugu fadhiso.
7. “Waxaad waqti la qaadataa qoyskaaga? Way wanaagsantahay maxaa yeelay nin aanan waqti siinin qoyskiisa ma noqon karo nin wanaagsan.
8. “ Ninka wanaagsan si baaxad leh ayuu u jecelyahay xaaskiisa, kama laba labeynayo inuu farta ku fiiqo isagoo la joogo saaxiibadiis oo uu yiraahdo taasi waa gacalisadeyda.